11 Tallaabo Oo Aad Ku Maarayn Kartid Miisaankaaga - Daryeel Magazine
In aad si xad dhaaf ah u cayisho waxay halis weyn kuu gelineysaa dhibaatooyin caafimaad sida dhiig kar sare, sonkorow iyo wadnexanuun. Kala doorashooyin caafimaad samee maalin walba halkii aad marna cunto cuni lahayd marna iska joojin lahayd. Si tartiib ah u luminta ½ ilaa 2 bound toddobaadkiiba ayaa ugu wanaagsan. Haddii aad miisaan badan si deg deg ah u lumiso, badanaa cayilku dib ayuu kuugu soo noqonayaa.
Liin dhanaanta iyo liin-macaanta oo can ku ah faytamiin C-ga, loona adeegsado in la isaga …